Ny olona izay manodidina ny olona, izay tia ho irery no lehilahy izay toa tsy azo nidirana, Ity no ampahany lehibe mahatonga ny vehivavy dia matetika no tia ireo karazana kely ny zava-miafina. Izy ireo dia raisina ho toy ny fanamby izay mahatonga azy ireo na dia manintona kokoa. Izany no kely ny vokatry ny fisarihana toy ny andriamby izay mitranga. Noho izany, eny, izy ireo dia sarotra ny hahatakatra, mba akaiky azy ireo fa toy ny maro izany no iray amin’ny lehibe izay toa mifanohitra ny famitahana. Ho an’ny sasany izy no tonga lafatra, ny hafa kosa izany dia ny lehilahy no toe-tsaina tsy zaka. Na izany aza, ny lehilahy iray izay manokatra be loatra, izay jereo koa izany no tsy mandeha mba hahazoana ny hanangana izany mahasarika. Toa enigmatic ary tafiditry ny fahavalo, ka mazava ho azy izany dia mahatonga tena mafy te-hahita izay miafina ao anatiny. Izy ireo matetika ny fefy ary tiantsika ny hahomby ny hiditra ao anatiny, ary hahita ny izao tontolo izao. Fa te mba gaga sy handresy irery ny lehilahy dia tsy araka izay tsotra. Izany dia ilaina mba hampihatra ny fomba marina ary mampifanaraka ny asa ataontsika mba tsy atao be loatra fa tsy mba ho any ny lalao na. Izany no manan-danja kokoa mba ho azo antoka mazava ho azy, satria ny vehivavy sasany velona ity karazana sy ny lehilahy ihany no hampitombo, na oviana na oviana. Noho izany, tokony ho fantatrao, mba hanam-paharetana sy mianatra ny mahalala azy tsara alohan’ny handeha ny fanafihana. Ny mangina, amin’ny fihainoana, dia mety mila mba hanintona ao amin’ny fomba tsara indrindra.
Ireo olona tia ny irery, fa, tahaka ny olona hafa rehetra ihany koa izy ireo hankafy ny orinasa dia mikasika ny olona iray izay mahafantatra ny fomba tena mahatakatra izany. Toa tsy azo nidirana, dia ny azy izao tontolo izao, lavitra ny vahoaka sy ny ahiahy fa dia mitaky. Izy dia aleony ny mangina, ny hatsaram-panahy, ary, mazava ho azy, ny naha-irery. Izany dia lehilahy iray izay tony, sy izay mahita ny fankaherezana ao amin’ny fahanginana. Izany no mifanohitra tanteraka ny olona izay tia ny antoko na izay mampiseho azy ho azo velabelarina be. Ity iray ity, dia tsy sarotra loatra ny adiresy. Ankoatra izany, dia matetika izy fa tsy tonga fa tsy ny mifanohitra amin’izany. Dredge manirery olona, dia sarotra kokoa, satria matetika tsy ny voalohany, na ny faharoa na fahatelo irery Ny lehilahy be, noho izany dia tsy mora ny hiverina eo am-pony, ary, mazava ho azy, izay mahatonga azy irresistibly mahafatifaty. Efa akaiky ny faharesen-dahatra, izay miaraka aminy, dia ho tsara sy tony fa ianao dia hahita taonina ny zava-mahaliana indray mandeha ny ranomandry dia tapaka. Fototra ireo dia tsy voatery ho ny tsara fanahy ny lehilahy izay mahasarika ny vehivavy. Ao amin’ny hariva izany dia tsy ny tena maneho hevitra, ny asa izy, no tsy mandany fotoana be dia be amin’ny mpiara-miasa, dia mahafantatra azy satria toa kely»any an-kafa»na ny fefy ary mahatonga anao adala na dia eo aza ny zava-drehetra. Marina fa ny saro-pantarina ny vokany, fa ny olona izay tsy milaza loatra, izay mitaky ny dingana iray indray kosa ny hafa, ary izany dia ao izany fa misy ny fahasamihafana fa mety hahaliana ny vehivavy. Saina, mba tsy hamitahany ny irery ny lehilahy, dia ilaina ny mandeha any amin’ny voa ny sira ary aza mihorohoro ny fahazarana am-piandohana. Mba hiatrehana izany, dia tsy maintsy ho tena malefaka, tena an-kolaka. Ny lehilahy discrete andriamby ny naha-irery no tsy mankasitraka be dia be ny ankizivavy tanteraka fofolles sy hamaha izay nibedy sy miteny tena (koa) matanjaka. Ny mifanohitra amin’izany, izy ireo dia tahaka ny ankizivavy izay tony sy voajanahary amin’ny ny fihanaky.
Ny adiresy, ity no tsy dia sarotra
Zava-dehibe tsy mba maika ny zava-drehetra.
Mety mila miezaka ny fotoana maro
Izany dia tokony mba tsy hahakivy anareo. Raha ny marina, ny ry zalahy ao irery no tena misisika be ianao, ary ho hitanao izany ny kely hafahafa fa ny ankizivavy ny fomba fiasa. Ianao dia tokony handeha ho azy, moramora, mampiasa hatsikana, ohatra, fa eo amin’ny mamorona andevo tsy maha loatra invasive. Ny toerana velona dia tsy maintsy ho tafita. Be dia be ny vehivavy no tena te-hanova azy sy ny hanao izany izy ka manadino ny lafiny namandrika, fa izany dia fahadisoana ny tsy hanolo-tena. Izany dia ilaina mba tsy ho be loatra ny extroverted ary te-hanao izany nivoatra haingana loatra. Ankoatra izany, raha toa ianao vao hitsena azy, aleoko ho tso-po anareo, dia tsy manova. Tamin’ny faran’ny volana vitsivitsy, na dia taona maro, miaraka isika dia afaka manao fahafoizan-tena sy ny ezaka ataontsika, fa na ianao any an-toerana dia tsy mametraka ny fanovàna fotsiny ny hampifaly azy. Be dia be ny vehivavy izay heverina ho tsy zaka toy izany ny olona. Raha ny marina, ny tsy fisian’ny fiainana ara-tsosialy, ny fanirery sy ny lafiny mafana kely loha dia tsy izay no tena tsara tarehy, isika milaza fa isika dia handeha ho leo, amin’ny ankapobeny zazavavy tia latsaka amin’ny olona izay manana ny maro olom-pantatra izay dia mametraka azy ho ny olona, ary izay tia vaky. Noho izany, dia tsy mba toy izany tsotra mba hiroborobo ny lafiny sy ny hanorina zavatra roa ihany no eo ambanin’ny filazana fa izy dia tsy tia loatra hahazo hivoaka sy hihaona olona vaovao. Na izany aza anefa, azonao atao ihany koa ny mahatsapa mahery sy manana faniriana ny hanorina zavatra mahery aminy. Izany dia tsy ilaina ny mieritreritra fa izany dia tsy ho vita fa izany dia tsy maintsy mba hampiseho faharetana, ary indrindra indrindra, toy ny ao amin’ny famitahana dingana tsy ho loatra tampoka. Raha toa ka efa nahavita ny hiatrika izany ary fa tsy manohitra ny hevitra hoe mitohy ny adihevitra, dia efa saika nandresy ho anao. Satria tsy mora ny debride ny ankamaroan ny fotoana. Amin’izao fotoana izao, misy mila foana ny fifanakalozan-kevitra. Fantatrao araka izay ataoko noho ny hitaona manirery olona dia tsy maintsy ho marani-tsaina sy miandalana. Izy ireo tahaka ny vehivavy izay manana kolontsaina mihoatra noho ny eo ho eo, ary mahaliana ny resaka. Noho izany dia ao amin’io fomba io fa isika dia mety ho afaka hitandrina sy hiaina amin’ny olona izay tia ny hitoka-monina ny tenany. Ny lehilahy irery tia ny mitoetra irery nandritra ny ora maro sy tsy ho tezitra aminy. Izany dia tsy maintsy, noho izany, hanome azy te-hiala fa tsy haingana loatra. Ianao dia mila maka ny fotoana mba hampiseho azy ny tsara andaniny sy ny ankilany izay afaka manana ny»fiainana mavitrika ara-tsosialy». Raha izany dia niakatra ho any aminao mba soso-kevitra ny fanendrena, mifidy ny toerana mangina sy ny namana. Moa ve ianao dia mety tsy hanelingelina ny fahazarana amin’ny alalan’ny fitondrana azy ho any amin’ny-damaody fisotroana izay mihetsika miaraka amin’ny mozika tsara, na inona na inona raha tsy amin’ny fotoana voalohany. Mazava ho azy fa afaka l mba hanalavitra ny fefy mba tsara kokoa nahafolaka azy io, nefa izany dia tsy maintsy atao tsikelikely. Raha tsy izany, dia misafidy ny handeha tsara tarehy ao amin’ny valan-javaboary. Rehefa mirenireny manodidina, dia avadiho eo amin’ny fiainantsika, ny fandinihana na ny asa, ny firehetam-po. Mianatra mba hahitana ny tenanao ao am-pilaminana ny tontolo iainana, ary izany no ho azo antoka, izy no mankasitraka tokoa teo Anivon ny olona izay sarotra zakaina amin’ny olona izay tia irery no ny tena mahagaga fa tsy ny tena tsy zaka, toy ny tovolahy feno fitiavan-tena na ny lehilahy tsy matotra. Bebe kokoa izy ireo toetra amam-panahy noho ny saro-kenatra, na ny bandy koa Mila. Fa ny zava-dehibe indrindra, izy ireo, na dia mahafinaritra kokoa isan’andro fa ny Alfa Lehilahy. Fitiavana Mpanazatra, mpanoratra sy ny mpandaha-teny ao amin’ny sehatry ny famitahana, ny fiainan’ny mpivady ary ny reconquest. Avy roa-fito, an’arivony ireo lehilahy sy vehivavy izay nanao ny fampiasana ny services
Ny Vehivavy arabo Liana amin'ny Fiarahana amin'ny Muslima →